Sannadkii 2014 gudaha Faransiiska, 32% booqashooyinka internetka ayaa ka yimid a qalabka gacanta tanina waa isbeddel sanad walba sii xoogeysanaya.
Xeerarka tixraac dabiici ah mid u dhexeeya raadinta moobiilka iyo raadinta qadiimiga ahi hadda iskumid ma aha. Xaqiiqdii, Google, oo raadineysa inay bixiso khibrada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee isticmaale, waxay cusbooneysiisay algorithm-keedii 2015 si ay xoogga u saarto goobaha.Moobiil saaxiibtinimo ” natiijooyinka raadinta. Sidaa darteed waa lagama maarmaan inBaro sida loo hagaajiyo boggaaga booqdayaasha moobiilka (taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada).
Barnaamijka casharradan bilaashka ah Ku-hagaaji tixraacaaga SEO / Mobile
Ujeedada tan Barashada SEO-ga bilaashka ah waa adiga Baro sida loo hagaajiyo bartaada mobilada 4 waji:
Qeybta 1: U gudbi Xukunka Google
Waxaan wada arki doonnaa sharciyada ay dejisay Google si loo tixgeliyo Saaxiibtinimada Gacanta iyo sida loola qabsado ...
Bilaash: Ku hagaaji mobilkaaga SEO-ga 4 talaabo Diisambar 28, 2020Tranquillus
READ Ka warran haddaanan rabin in dib la ii sooco?
horeBilaash: Tallaabooyinkaaga ugu horreeya ee Pinterest
socdaBilaash: Kusamee suuqgeyntaada 'WordPress' WPfusion